hadiyad dhigay Soosaarayaasha | Shiinaha hadiyado dhigay Shirkado & Warshad
Qaabka Guga iyo Jiilaalka, Shayga hadiyadda, Maalin kasta Isticmaal cashada
Ururintaani waa naqshadeena cusub, swan waa cunsur caan ah sanadkaan. Waxaan u adeegsanaa cashada oo aan kaliya u aheyn cuntada sidoo kale qurxin karta gurigaaga. Isku-dhafkan ayaa sidoo kale caan ka ah adduunka.
Kani waa hadiyado tayo sare leh oo lagu diyaariyey taxane taxane ah oo sameeya saxan, qaxwo, koob, shaah, koob iyo suugada, baaquli saladh, saanwij saxan iyo keeg istaaga iyo wixii la mid ah, hadii aad jeceshahay qaabkan laakiin sheyga kala duwan, fadlan xor u ahaw inaad la xiriirto na si aad u hesho
Naqshadeynta Cactus Cactus Caan ah ee ugu Caansan iyo waxyaabaha hadiyadaha ah
Ururintaani waa naqshadeena cusub, kaktusku waa cunsur caan ah sanadkaan. Waxaan u adeegsanaa cashada oo aan kaliya u aheyn cuntada sidoo kale qurxin karta gurigaaga. Isku-dhafkan ayaa sidoo kale caan ka ah adduunka.
Kani waa qalab tayo sare leh oo lagu diyaariyey taxanaha kaktekus wuxuu sameyn karaa saxan, qaxwo, koob, shaah, koob iyo suugada, baaquli saladh ah, saanwij saxan iyo keeg istaaga iyo wixii la mid ah, hadaad jeceshahay qaabkan laakiin shey ka duwan, fadlan si xor ah ula xiriir na si aad u hesho
Ururintaani waa nashqadeynteenna cusub, waxyaabaha jacaylku ka kooban yahay waa cunsur caan ah sannadkan. Waxaan u adeegsanaa cashada oo aan kaliya u aheyn cuntada sidoo kale qurxin karta gurigaaga. Isku-dhafkan ayaa sidoo kale caan ka ah adduunka.